८ तस्विरमा हेर्नुहोस् बिजुलीबजारमा यसरी बन्दैछ नेपालकै पहिलो 'नेटवर्क आर्क ब्रिज', Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
८ तस्विरमा हेर्नुहोस् बिजुलीबजारमा यसरी बन्दैछ नेपालकै पहिलो 'नेटवर्क आर्क ब्रिज'
काठमाडौँ। राजधानीको बिजुलीबजारस्थित धोबीखोलामा बनिरहेको विश्वमै आकर्षकको रुपमा मानिएको नेटवेर्क आर्क ब्रिजको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको छ। यो नेपालकै पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिज हो।
५१.४५ मिटर लामो र १२ चौडाई रहने यो ब्रिजको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन करिब दुई महिना लाग्ने इन्जिनियर राजेश बनले जानकारी दिए। उनले बताएअनुसार आगामी मंसिरको दोस्रो सातासम्म यो ब्रिज संचालनमा आउने छ।
ब्रिजको स्ट्रक्चरको निर्माण कार्य लगभग सबै सकिएको छ, अब फिनसिङ र यसलाई सडकसँग जोड्न बाँकी रहेको छ, उनले भने। उनका अनुसार अहिले ब्रिज फिनिसिङ कार्यमा करिब २० जना मजदुर कार्यरत छन्।
नेपालीहरुको महान चाड बडादशैंमा पनि काम नरोकिने जानकारी दिँदै उनले भने– केही मजदुर दशैंको लागि घर गएपनि केही भने यतै हुने हुँदा दशैंमा पनि ब्रिज फिनिसिङको कार्य रोकिनेछैन। ११ करोड ६५ लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको नेटवर्क आर्क ब्रिज बनाउने प्रविधि अहिले विश्वभर नै प्रख्यात हुँदै गएको छ।
नयाँ बानेश्वर माइतीघर जाने साइटमा निर्माण भइरहेको यो ब्रिज बनेपछि माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ आउने साइटमा पनि यस्तै ब्रिज बन्ने जनाइएको छ। दुवैतिर ब्रिज बनेपछि त्यस क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जामको समस्या पनि हटेर जाने छ।